Cabdiraxman Cabdishakuur oo si adag u dhaliilay siyaasadda madaxweyne Farmaajo | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Cabdiraxman Cabdishakuur oo si adag u dhaliilay siyaasadda madaxweyne Farmaajo
Cabdiraxman Cabdishakuur oo si adag u dhaliilay siyaasadda madaxweyne Farmaajo
Hogaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa si adag uga hadlay siyaasada Madaxweyne Farmaajo uu doonayo inuu dalkaan ku hogaamiyo mudada xilkiisa uga dhiman.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa Madaxweyne Farmaajo ku tilmaamay mid ku xad-gudbay awood qeybsiga siyaasadeed ee dalka maadaama uusan ilaa iyo haatan soo magacaabin ra’iisul wasaare cusub asigoona intaas ku daray in Farmaajo uu doonayo labada jago inuu asiga isku maamulo.
Hogaamiyaha Xisbuga Wadajir qoraalkiisa oo aad u dheeraa halkaan hoose kaga bogo;
Waxaase muuqata in madaxwyne Farmaajo uusan weli waano qaadan, kuna kedsoon yahay, dulqaadka dadka oo uu doqonnimo iyo tabar la’aan mooday iyo qar iska tuurnimo in badan u soo shaqeysay. Ma jirto meelo badan uu ku sii dhuunto, maalmihiisuna way tirsan yihiin.”